Ibhabhathane elibhabhayo lihlala ubusuku bonke ngobuchule (2) - I-Airbnb
Ibhabhathane elibhabhayo lihlala ubusuku bonke ngobuchule (2)
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguMonika
Wamkelekile kule Bed & Breakfast yakudala. Indawo egqibeleleyo yokuphumla kwaye ufumane inkuthazo. Igumbi lokulala lihonjiswe ngemisebenzi yobugcisa. Xa uvula ifestile yakho uya kuva amanzi aqukuqela kumjelo weWilhelmina. Emva kokuchitha ubusuku kweli gumbi lokulala lithandekayo, uya kwamkelwa rhoqo kusasa ngesidlo sakusasa kwi-balcony terrace. Apha unokuva iintaka zintyiloza kwaye unombono wegadi eluhlaza ezele ziintyatyambo. Okanye endaweni yomlilo opholileyo wenkampu?
Wamkelekile kule Bed & Breakfast yakudala. Indawo egqibeleleyo yokuphumla kwaye ufumane inkuthazo. Ukuba ukhetha ukuchitha ubusuku apha, uya kulala kwigumbi labucala elihonjiswe ngemisebenzi yobugcisa. Ukongeza, igumbi ngalinye linebhedi ekhululekileyo kabini. Xa uvula ifestile yakho uya kuva ukuhamba kwamanzi kumjelo weZuid-Willemsvaart ngaphandle kwefestile yakho. Unokujonga kwakhona izikhephe ezidlula yonke imihla. Emva kokuchitha ubusuku kweli gumbi lokulala lithandekayo, uya kwamkelwa rhoqo kusasa ngesidlo sakusasa kwi-balcony terrace (ifumaneka kuphela ngemozulu entle). Apha unokuva iintaka zicula kwaye unombono wegadi eluhlaza ezele ziintyatyambo. Isiqalo esihle sosuku. Ngokubonisana nomamkeli-zindwendwe kunokwenzeka ukwenza umlilo wenkampu kule gadi intle. Ukuba ufuna ukuchitha imini kule gadi, ungasebenzisa kwakhona ilayibrari ye-hostess. Uneencwadi ezininzi apho unokulahleka khona kwincwadi kwaye ulibale ngokupheleleyo ngehlabathi elikungqongileyo. Indlu ibekwe kwindawo ezolileyo phakathi kweefama kunye nendalo. Ke maninzi amathuba okuhamba kunye / okanye okuhamba ngebhayisekile ukufumanisa indalo kunye nokusingqongileyo. Inkcazo yayo yonke imisebenzi enokwenzeka kwindawo iya kucaciswa ngakumbi kweli phepha. Ukuba ufuna ukuphumla kwindawo yokuhlambela ekwabelwana ngayo emva kosuku olude, ungasebenzisa ibhafu enkulu ethandekayo okanye ishawa entsha. Ucango lunokutshixwa kwaye unokukonwabela ukuba wedwa. I-Shampoo kunye neoli yokuhlamba zihlala zilungele ukusetyenziswa. Ukuba ufuna umsebenzi wokuqala, ungaya kwindibano yocweyo kunye negcisa lokwenyani. Umamkeli-zindwendwe ulandele ikhosi yobugcisa kwaye angathanda ukukunika isikhokelo sokwenza imisebenzi yobugcisa beceramic (Nceda ugcine kwangaphambili). Uyathanda ukubukela umabonakude? Okanye ungathanda ukubukela imuvi ngokuhlwa? Kwakhona kunokwenzeka ukusebenzisa igumbi lokuhlala umabonwakude ekhoyo. Ukongeza, ungasebenzisa i-Wi-Fi kuyo yonke indlu. Ngokubonisana kunokwenzeka ukuba umninimzi uya kupheka isidlo sakusihlwa semifuno ngentlawulo.
• Ibhedi yokulala yabucala
• Idesika kwigumbi lokulala
• Elinye lamagumbi amabini okulala linesinki (Igumbi eliblowu)
• Ukunokwenzeka kwe-air conditioning kwigumbi lokulala
• I-Wi-Fi kwindlu yonke
• (Igumbi lokuhlambela ekwabelwana ngalo) elinebhafu enkulu, ishawari, indlu yangasese, iisinki ezimbini kunye nesitshixo sabucala.
• (Igumbi lokuhlala ekwabelwana ngalo) nomabonakude kunye nesofa
• Uphahla lwebhalkhoni enkulu onokuyisebenzisa
• Ithala leencwadi
• Indawo yomlilo
• Isidlo sakusasa (Ukuba udibana kwangaphambili kusenokubakho iindlela onokukhetha kuzo ngokumalunga nezidlo ezahlukeneyo okanye izinto ezikwalana nazo)
• Isidlo seVegetarian (ngokubonisana ngentlawulo)
• Ukuhlala ixesha elide, ilinen iguqulwa kanye ngeveki.
• Iitawuli ezintsha zinikwa yonke imihla.
Umasipala waseNederweert ngumasipala omncinci oluhlaza kumbindi weLimburg. Iqulethe imbali etyebileyo eyonwabisayo ukuyifumana. Indawo kamasipala igubungela i-101.78 km2 kwaye kukho malunga ne-17001 yabemi. Ineziko lelali elimnandi elineekhefi ezahlukeneyo, iindawo zokutyela kunye neevenkile. Izixeko ezikufutshane yi-Weert neRoermond.
Lo mhlaba umi ngqo kwi-sluis 15 eNederweert. Apha unokubona ngamehlo akho indlela izikhephe ezidlula ngayo kwi-sluis. I-watermill eyimbali esasebenzayo ibekwe ecaleni kwendlu. Eyona dolophu iluhlaza eNetherlands, Weert, kumgama 4 km. Kukwakho nesitishi apha. Mininzi imisebenzi onokuthi uyenze kwindawo. Ndiza kunika isishwankathelo samathuba. Ndiza kuqhubeka ndigqibezela olu luhlu. Kwakhona kunomdla ukujonga iwebhusayithi yeVVV phakathi kweLimburg: https://vvvmiddenlimburg.nl/nl & https://www.eropuitineigenland.nl/.
IHoeve SamSam Cabrio Tuk Tours: Umbindi weLimburg unobuninzi bendalo entle onokuyifumana. Kodwa endaweni yokwenza oko ngendlela yemveli njengokuhamba ngebhayisekile okanye ngeenyawo, le nkampani ibonelela ngeendlela ezikhethekileyo zothutho ukufumanisa indawo.
Ipaki yeSizwe yaseGrote Peel: Fumanisa iindlela ezahlukeneyo zokuhamba intaba kwindalo. Usenokudibana nenkomo endleleni. Indawo entle kakhulu inokufunyanwa kule paki yesizwe.
Eynderhoof Limburgs Open Air Museum: Funda okuninzi ngembali. Mininzi imisebenzi onokuthi ube nayo kule myuziyam.
Hof van Schoor: Igadi yeti entle yendalo. Kucetyiswa kakhulu ukuhamba okanye ukukhwela ibhayisekile. Hlala kwi-terrace yangaphandle okanye uhlale ngaphakathi. Emva koko phumla ngenye yeeti ezingama-40 ezahlukeneyo abanazo. Ngaba uthanda into eswiti? Kukho ukhetho oluninzi lweepastries ezibhakwa ngamagcisa. Izilwanyana ezahlukeneyo ziyakwazi ukunconywa kwisayithi.
Umyili we-Outlet Roermond: Ukuba uyathanda ukuthenga, le ndawo ngokuqinisekileyo kufuneka uyindwendwele. Le ndawo inkulu inobunewunewu ikumgama wokuhamba kumbindi wesixeko esiyimbali saseRoermond. Iindwendwe zisuka kude zisiya kuthenga kule ndawo. Ungathenga iimpahla zomyili apha ngexabiso elithotyiweyo. Yeyona ndawo inkulu kwaye iphumelele kakhulu eYurophu. Kukho iivenkile ezili-185 onokuzityelela kunye neendawo zokutya ezingama-25. Kukwamnandi ukudibanisa kunye notyelelo kumbindi weRoermond.
I-Klein Costa Rica: Ukuba ubusoloko ufuna ukuncoma amabhabhathane ashinyeneyo kunye nezirhubuluzi ongadibananga nazo endle eNetherlands, ke iKlein Costa Rica luhambo oluhle kuwe. Le paki ibekwe eSomeren, kumgama omfutshane ukusuka eNederweert. Imalunga nama-800 m2 ngobukhulu kwaye kukho okuninzi okuncomekayo. Iintlanzi, iintaka, izityalo kunye nemithi ubuhle betropiki ongayi kukruquka ngabo. Mhlawumbi kuhle ukuba ufuna ukufota ibhabhathane elahlukileyo kodwa awuzange uye kwilizwe elitshisayo.
Ngexesha lokuhlala kweendwendwe, umninimzi akasoloko efumaneka, kodwa uhlala ezama konke okusemandleni akhe ukuba alungele iindwendwe kwaye enze ukuhlala kwabo kube mnandi ngokusemandleni. Ukwanalo nolwazi malunga nemisebenzi umntu anokuyenza kwindawo.
Ngexesha lokuhlala kweendwendwe, umninimzi akasoloko efumaneka, kodwa uhlala ezama konke okusemandleni akhe ukuba alungele iindwendwe kwaye enze ukuhlala kwabo kube mnandi ngokusem…
Iilwimi: Nederlands, Deutsch
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Nederweert